Qarax Askar American Ah Lagu Dilay. – Bogga Calamada.com
Qarax Askar American Ah Lagu Dilay.
July 17, 2017 7:37 am Views: 155
Wararka ka imaanaya gobalka Helmand ee konfurta Dalka Afghanistan waxey sheegayaan in dagaalo culus ay ka dhaceen deegaano hoostaga magaalada Naawah oo ka tirsan gobalkaasi.
Dagaalka ayaa yimid kadib markii kolanyo ka tirsan ciidamada dowlada Nasaarada Mareykanka iyo kuwa maamulka daba dhilifka Kaabul ay isku dayeen iney weerar ku soo qaadaan magaalada Naawah oo muddo dheer ku jirta gacanta Imaarada Islaamiga Afghanistan.
Kolanyada duulaanka ah waxaa qarax culus lagula beegsaday agagaarka deegaanka Jarnamu oo ka mid ah deegaanada dhaca duleedka magaalada Naawah ee konfurta dalka Afghanistan.
Warbaahinta Imaarada Islaamiga ah ee Afghanistan ayaa baahiyay in miinada ay haleeshay gaari nooca gaashaaman ah oo ay lasocdeen askar ka tirsan Nasaarada Mareykanka.
Sidoo kale warbaahinta Imaarada ayaa xaqiijiyay in miinada gabi ahaan ay burburisay gaariga gaashaaman ee ay la kacday,sidoo kale qaraxaasi waxaa lagu dilay Afar Askari American ah oo gaariga la socday.
Kolanyadan qaraxa lala beegsaday ayaa lagu jabiyay dhowr duulaan oo maalmihii lasoo dhaafay ay kusoo qaadeen magaalada Naawah oo wali ku jirta gacanta Mujaahidiinta Imaarada Islaamiga Afghanistan.
Askartan Americanka ee lagu dilay gobalka Helmand ayaa kusoo aadayo xilli Labo maalin ka hor howlgal gaar ah oo ciidamada Mujaahidiinta Imaarada Islaamiga Afghanistan ka fuliyeen deegaan ka tirsan gobalka Barwan ee Waqooyga Afghanistan ay ku burburiyeen gaari gaashaaman kuna dileen Saddex askari oo American ah.